Ingalo yesithathu ka 'Sam' kwimisebenzi yeoyile kaJane Radstrom | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sisoloko sifuna ileyibheli, chonga kwaye kutheni ngayo yonke into esingqongileyo. Ngononophelo sizama ukuqonda nokuqonda okungaphandle kwesiqhelo okanye oko sikuqondayo njengesiqhelo. Ngamanye amaxesha ibango liyakwazi ukulibala inyani phambi kwethu kwaye oku kuhlala kusenzeka kubugcisa.
Njengokuba ibiyimveliso evela kwivenkile apho ileyibhile ikuxelela ixabiso, igama lendalo kunye nokwakheka, kwimisebenzi emininzi ngendlela efanayo yokuhambisa into eqondakalayo iphawulwe. igcisa ngokwalo alifuni ukuba siqonde. Masithi uyishiya njengokuba injalo, njengengalo yesithathu epeyintwa nguJane Radstrom kolu luhlu lobugcisa lubizwa ngokuba 'nguSam'.
Ekubonweni kokuqala komsebenzi esiya kuwo wonke opeyintiweyo wegcisa. Sifumene Ukutya okumnandi, iposi kunye neoyile ukuba, nangona ifuna ubunyani, ihlala iveza ngenye indlela ukuzola kunye nokuthantamisa kwale ntombazana kuqubuda ebhedini yayo.
Siya kwiinkcukacha kwaye sele sikuloo khangelo lokuzimisela kwaye yintoni engalinganiyo ekubunjweni, eso sandla sesithathu. Sijonge impendulo ekhawulezileyo, iya kuba yeyokuba ufuna ukubonisa intshukumo okanye phakathi kwale milo eyahlukeneyo ngelixa uleleyo, uya kufumanisa ukuba enye ihlala ilungile xa ulele iiyure ezintle.
Sele sineelebheli kwaye sijonga ngokukrokrela izizathu nezizathu Yengalo yesithathu, kodwa ukuba sijonga wonke umsebenzi wakhe, siyaqonda ukuba enye yeenjongo zalo mculi ogama linguJane Radstrom kukuvezwa kabini kuninzi lwemisebenzi yakhe.
Ukupasa yewebhusayithi yakho ukwazi yonke imizobo yeoyile kunye hlala ulahlekile ngenxa yendlela okonileyo ngayo ukwazisa iimodeli zabo.
Sinayo enye ioli kolu ngeno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ingalo yesithathu kwipeyinti yeoli kaJane Radstrom 'Sam'
+ 15 Izimemo zoMtshato ezothusayo